प्रहरी जीवन, कथा र व्यथा – Chitwan Post
प्रहरी जीवन, कथा र व्यथा
६ वर्ष भयो मैले मेरो कर्तव्यलाई अनुशासित भएर पूरा गर्न थालेको । नेपाल प्रहरीको जागिरमा कर्तव्य निभाइरहँदा परिवारप्रतिको कर्तव्यचाहिँ भुलिरहेको हुन्छु । आखिर मेरो कर्तव्य घरमा पैसा पठाउनु मात्र त पक्कै होइन । घरिघरि सोच्छु, म मात्र त होइन नि, मजस्ता धेरै छन् । हाकिमको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै काम गर्न तम्सिहाल्ने बानीले पनि दिक्दार लाग्न थालेको छ अचेल । न राम्रो सेवा न सुविधा छ । महिनाको थोरै रासनले यो खिरिलो ज्यान दिनरात नभनी दौडिरहेको हुन्छ । भोक, प्यास, निद्रा, डर अनि परिवारप्रतिको जिम्मेवारी । अरु त अरु शौचालय जाने फुर्सदसमेत नहुने कहिलेकाहीँ । यो बाटो मैले नै रोजेको हो । तलबको लागि मात्र म यो बाटो हिँडेको पनि होइन । देशको लागि केही गर्छु भन्ने अभिलाषाका साथ हिँडेको एउटा युवक हुँ म । हुन त अरु पनि छन् म सरहका कर्मचारी, जसले आफ्नो कर्तव्य र खाएको सपतलाई बिर्सेर पैसाको लागि देशको अभिमान बेचे । जसको यही अवधिमा कति घडेरी थपिए त केही घरका तला थपिए ।
चौबिसै घन्टा खटिरहँदा पनि सुविधा केही छैन । परिवार कसरी चलाउने ? एक्लो जीवन जिउनका लागि त तलब पर्याप्त छैन भने एउटा परिवार नै चलाउन कसरी पुग्छ ? हप्ता वा महिना त कुरै छोडौँ, चाडपर्वमा समेत छुट्टी मिल्दैन । यो कस्तो सेवा हो ? चाडपर्वमा आफ्नो परिवार साथीसंगीसँगै बसेर मिठोमसिनो खाएर रमाइलो गर्ने रहर आखिर कसलाई नहोला र ? के हाम्रो व्यक्तिगत जीवन छैन ? के हामीलाई पनि आफ्नो परिवार र आफन्तहरुसँग खुसी साट्ने अधिकार छैन ? यो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, शब्द मेरो होलान् तर आवाज सबैको हो । कसैले यस्ता सबैकुरा मनभित्रै दबाएर राख्छन् त कसैले यो परिवेश अन्त्यको लागि निर्धक्क भएर आवाज उठाँउछन् । फरक यत्तिमात्र हो ।
हामीजस्ता सोझासाझा र आफ्नै क्षमताले नियुक्ति भएकाहरुको त झन् विनाकसुर जागिर खाइदिनेदेखि सरुवासम्मका धम्की आउँछ । कहिले मन्त्रीका मान्छेको त कहिले अरु नेता, कहिले भने आफ्नै हाकिमबाट । धेरैजसो भइरहन्छ यस्तो अब त सामान्य लाग्न थालिसक्यो । यद्यपि, सबै कुराको पोकोलाई एकातिर बिसाएर कुकुरको पनि एकदिन आउँछ भन्छन् । म त मान्छे हो भन्दै कुँदिरहेछु । आफूलाई मात्र धावक सूचीमा राखेर पर्खिरहेछु त्यो दिन ….।
हामी सुरक्षाकर्मीहरु, जुन जनताको लागि भनेर दिनरात नभनी खटिरहेका छौँ । उनीहरु नै क्रूर छन् हामीसँग । एउटा लौरोको भरमा रात कटाउनुको पीडा । लौरोकै भरमा बन्दुकधारीसँग सामना गर्नुपर्ने पीडा जोकसैले कहाँ बुझ्न सक्छ र ? र, जसले बुझेका हुन्छन्, उनीहरु बुझ पचाउँछन् । न आफैँ बोल्न मिल्छ, न अरु कोही बोलिदिन्छन् कस्तो परिबन्ध हो यो ? सबै कुरालाई गाँठो पारेर मनभित्र राखी काममा गयो काम गर्दागर्दै मर्छ जोस जाँगर त्यो तनावपूर्ण परिस्थिति देख्दा । राज्यले पनि यति धेरै उपहास गर्छ कि मानौँ हामी राज्यका कुनै अंग नै हैनौँ । यस्तै यस्तै अनौपचारिक विग्रह मानसिक तनावले हामीजस्ता धेरै प्रहरी साथीहरू प्रताडित छौँ । अझै सत्ताशक्तिमा पहुँच नभएकै कारण भोग्नुपर्ने हैरानी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘पैसा नै सर्वाधिक होइन छोरा, यो काम त सेवाको हो, देशको लागि महŒवपुर्ण योगदान हो’जस्ता अग्रजहरुको यही युक्तिले मनलाई हौसाइरहन्छ । तर, पुण्य कमाउनकै लागि सबैको गाली सुनेर बस्दा अनि परिवार नै आफूसँग असन्तुष्ट हुँदा कहिलेकाहीँ मन भत्भती पोलेर आउँछ । सायद हामीजस्तै अन्य साथीहरुको परिवारलाई पनि लाग्दो हो आस, कि आफ्नो छोरा÷छोरी सरकारी जागिरे छ, टन्न पैसा कमाएर पठाउँछन् घरमा । यस्तै यस्तै ।
विरक्त त त्यतिबेला लाग्छ कि ठूला भनौँदाहरु रक्सीले मात्तिएर आउँछन् डर देखाउन । यसरी कि म उसकै घरको धनमाल चोरेर चोकमा उभिरहेको छु । मसँग आत्मरक्षाका लागि एउटा सिठ्ठी हुन्छ मध्यरातको १२ बजे । प्रहरीले दिनरात नभनी जनताको सुरक्षामा खटिए पनि उल्टै प्रहरीमाथि नै जाइलाग्न पुग्छौँ । हामी अनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको माहोललाई कम गर्न र प्रतिरक्षाका निम्ति अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गर्न बाध्य हुन्छौँ प्रहरी साथीहरू । जसको सुरक्षार्थ हामी दिनरात खटिरहन्छौँ उसैमाथि आक्रमण गर्ने के हामीलाई रहर थियो होला र ? तर हामीलाई ‘प्रहरी दमन’को पगरी भिराइन्छ । हुनसक्छ, केही खराब नैतिक चरित्र भएका र रिसले उन्मत्त केही प्रहरीले आक्रामक शैली प्रस्तुत गरे होलान् । तर, संगठनमा एक÷दुई जना खराब शैलीमा प्रस्तुत भए, पैसाको लागि आफ्नो कर्तव्य र निष्ठा भुले भन्दैमा त्यसको दोष सम्पूर्ण प्रहरीलाई नै दिएर हामीजस्ता निर्दाेष र कर्मठ प्रहरी साथीहरूलाई प्रहरी दमन र मिलेमतोको उपमा भिराउन मिल्ला र ?
हामीजस्ता सोझासाझा र आफ्नै क्षमताले नियुक्ति भएकाहरुको त झन् विनाकसुर जागिर खाइदिनेदेखि सरुवासम्मका धम्की आउँछ । कहिले मन्त्रीका मान्छेको त कहिले अरु नेता, कहिले भने आफ्नै हाकिमबाट । धेरैजसो भइरहन्छ यस्तो अब त सामान्य लाग्न थालिसक्यो । यद्यपि, सबै कुराको पोकोलाई एकातिर बिसाएर कुकुरको पनि एकदिन आउँछ भन्छन् । म त मान्छे हो भन्दै कुँदिरहेछु । आफूलाई मात्र धावक सूचीमा राखेर पर्खिरहेछु त्यो दिन ….। जुन दिन हामीजस्ता दिनरात देशको सुरक्षामा निरन्तर खटिरहने राष्ट्रसेवकहरुको प्रोत्साहनसँगै कार्यसम्पादनको निष्पक्ष उच्च मूल्याङ्कन हुनेगरी एक ठोस निर्णय पारित हुनेछ नेपाल सरकारबाट ।
एफजेट एस भर्जन थ्रीको राइड आउट
सिर्जनशील टोलमा आचार्य